Umhla My Pet » 3 Iingcebiso An Ulwalamano Emangalisayo
3 Iingcebiso An Ulwalamano Emangalisayo
Ubudlelwane zezona nto eningenakukholwa sinokuba. Kodwa zonke izinto ezibalulekileyo ebomini bazifunayo omninzi umsebenzi. Kufuneka baqinisekise ukuba umsebenzi ukugcina umanyano yethu emangalisayo. Kodwa into entle kukuba kunye iinguqu ezimbalwa ezilula sikwazi ukuqinisekisa umanyano engcono kwaye okona kubaluleke ngakumbi phakathi kwethu kunye nalowo sibathanda. Nantsi nje iingcebiso ezintathu ukunceda ukugcina ubudlelwane olukhulu:
Unxibelelwano ngundoqo kulo naluphi na ulwalamano. Thetha kwaye angazifihli neqabane lakho. Ukuba uya kube kunye neqabane lakho kungekhona emva bonke umele ube ezivulekileyo kunye? Ziyazi ukuba uziva njani, kunjalo ayamkelwa uziva njani ukuze abe, kwaye ukuvumela ukuba aye apho. Into embi onokuyenza ukugcina izinto emva koko iminyaka eminizni Ingadubula ngokupheleleyo ngenxa yento kufuneka wathi kwiminyaka eyadlulayo. Ukuba umntu okuthanda ngokwene- baza kusebenza ngalo yonke into eniza, nokuba kuthabatha ixesha. Nyaniseka yaye ekugqibeleni uya kukhula ngakumbi kunokuba ngakumbi ngaphandle.
Gcina zigulwana ngokwesondo Izinto Ukuya Strong
Emva kwethutyana kwicala ngokwesondo ubudlelwane angaqala ukuba sife ukususela kwimihla yangaphambili xa ungenakukwazi ukufumana ngokwaneleyo nganye ezinye. Bonisa lover wakho ukuba kusekhona ngokwesondo indlela ngokuthenga yangaphantsi sexy okanye nje ngokwenza make-up indlela yakho ethile. iindevu Red. iliso nomsi. Yenza unangoku ndifuna kuba ayaqhuba phantsi zonke.
Ndiyifundile amanqaku ukuthandana ezininzi apho abantu bathi kufuneka baphathe kubo kuthetha ukuba abagcine onzulu. Kubonakala engalunganga kum. Emveni kwakho konke, yintoni na abantu nto bathi nimfunayo? Ecaleni nemvo uburharha, umntu ububele kubonakala ukuba impendulo yeyona ithandwayo. Kwaye ngamanye amaxesha ndicinga ukuba yintoni engalunganga rhandzana echibini. Kukho abantu abaninzi kakhulu ekwenzeni le yesigungxo uyeke ngokwabo zijongeka yokosula. Bekusoloko kubonakala uhlobo sinayo rep embi njengoko fehle apho enyanisweni ke intlabo yakho yomeleleyo xa kuziwa kubudlelwane. Ukufudumala leyo ivela kumntu lowo nokuthantamisa, nobubele kwaye ngubani oyaziyo ukuba izilangazelelo lakho ngeke outdone. Ngoko ke, yiba nobubele iqabane lakho kwaye uya impendulo ngobubele. Ukuba ke abenzi njalo ngoko zifanele ixesha lakho. Musa ukulalanisa ibe ngumntu onesidima ukuba nabani nothando iya kufika emnyango yakho kwaye kuya kuba bhetele ukhe wacinga ukuba bilee.
Ezintandathu Flags Red Ukuze Spot On The Umhla First